အွန်လိုင်းပေါက်ဂိမ်းများ:ပူပြင်းတဲ့ Xxx ညစ်ညမ်းဂိမ္းစာကြည့်တိုက်
ဟေ့အဲဒီမှာ–ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများတစ်လျှောက်လာမယ့်နေ့မှအွန်လိုင်းပေါက်ဂိမ်းများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မြင်အဘယ်သို့ကျနော်တို့အကြောင်းအားလုံး။ ကျွန်မလုပ်သင့်တယ်ဒါကြောင့်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းထံမှသင်တို့ဆီသို့အရသွားကြောင်းဤသည်အပူဆုံးခရီးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအခုအချိန်မှာဆိုရင်၍ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်င့်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးအဘို့ရှာကြန္ယက္အေျ XXX။ ကျွန်တော်ဆွဲမျှမလာကြကြောင်းသိရနေစဉ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျမလှဖြစ်သွားနိုင်သင်ပျော်ရွှင်စေရန်သင်ကြိုက်မယ်လို့မယုံကြည်။, ကမ်းခြေကို၊ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်နာရီကြီးသောနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး XXX တောက်သောချည်နှောင်လျက်ရှိသောသင်စောင့်ရှောက်ဖို့အပူအောက်မှာကော်လာနှင့်အစိုင်အခဲအကြားခြေထောက်များအတွက်အလွန်ရှည်လျားအချိန်လာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ဖို့လူအကွာငြီးငွေ့စအဟောင်းဗီဒီယိုများကနေ့စဉ်စားသုံး–ပေါ်လာဖို့အတွက်အွန်လိုင်းပေါက်ဂိမ်းများနှင့်မြင်သောအရာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှကြွလာသောအခါသင်ပေးခြင်းအလှန်အစက်တပ်မက်ေျဖ–ရှိမရှိသိချင်သို့မဟုတ်မ! ကျွန်တော်ထင်အပေါ်အခြေခံပြီးအချက်အလက်တွေရရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ဝေး၊အကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများ၏အောင်မြင်မှုရောက်ရှိခဲ့ပြီးကောင်းစွာ၊ကအားလုံးကိုသင်တို့အဘို့အယူ။, ဂရုစိုက်ရန်ကျွှန်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်များအတွက်အပြည့်အဝအတွေ့အကြုံ? ကောင်းစွာရ၏တစ်ဦးအချပ်လှုပ်ရှားမှုအဘယ်အရာကိုမြင်သွားမယ့်အပေါ်ယနေ့။ ခင်ဗျားချစ်သွား!
တဦးတည်း၏အရေးအပါဆုံးအမှုအရာသည်ငါတို့အဘို့အကြောင်းပြောဆိုရန်အလွန်စတင်ချိန်မှစဒီမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX ညစ်ညမ်းဂိမ်းများဖန်တီးခဲ့ကြသီးသန့်အားဖြင့်အဘို့နှင့်အွန်လိုင်းပေါက်ဂိမ်းများ။ ဒီအခြားသူတယောက်မျှမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၊မဟုတ်သလိုကျနော်တို့စတော့ရှယ်ယာမှတစုံတခုတတိယ-ပါတီပလက်ဖောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ချက်အကြောင်းဤသည်အနာဂတ်အပြာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားနေစဉ်အခြားလူတိုင်းသည်ခွဲဝေသူတို့ရဲ့ဖန်တီးခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းချွတ်ဖို့မျိုးစုံလူတွေ၊ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တင်းကျပ်စွာနှင့်ရိုးသားဒီမှာဒါကြောင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းကိုဖွင့်အဘယျသို့လိုအပ်နိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်ဖို့။, သင်ဖျားနာခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့၏လက်ရှိအဆင့်အတန်းပိုနေမြဲကျားနေမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား? ၏သင်တန်းကိုသင်! အဘယ်ကြောင့်အွန်လိုင်းမင်းကဒီနေရာမှာသင်ပြမှကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ့အရေအလုံးအပေါ်အခြားပလက်ဖောင်းနှင့်တက်ထားရန်အချို့ကြယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်၊သင်ပျော်ရွှင်အချိန်အကြာလာ။ ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်အများ၏စည်းစိမ်သက္ေဒီနေရာမှာနှင့်အတူတစ်ခုလုံး၏အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းနှင့်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုကြောင်း၊သင်တို့အဘို့အအစား။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု–မှာကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်ယူသွားမယ့်ဘာကိုအပေါ်ဒီနေရာမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကအဆိုပါဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့ပြီးတော့အချို့။, လုံခြုံတဲ့နေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ဂိမ်းအိမ်နှင့်သင်သဘောပေါက်မယ်၊ပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်သည်မှကြွလာသောအခါသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုလို!
သင်ရှိသည်သည့်အခါဒေတာဘေ့စအကျော် ၄၀ ဂိမ်းများ၊ဒါဟာသဘောမျိုးတွေအများကြီးသွားဖို့အပြန်အသီးအထို့ကြောင့်မကြာခဏနိုင်ရန်အတွက်ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္သူတို့ကိုဒါကြောင့်လူသစ်နိုင်လာပြီးကျွန်မတို့တကယ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်တိုင်းဂိမ်းထဲမှာလတ်ဆတ်တဲ့နှင့်ပျော်စရာ။ အပေါ်မူတည်ပြီးအရင်းအတိုင်း၊ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ခက်ခဲစွာစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကိုချစ်၏–ဒါပေမဲ့အသက်အကြီးဆုံးျဖစ္ေန–ခေါင်းစဉ်၏ရှေ့၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမှကြွလာသောအခါသင်ပေးခြင်းအတွေ့အကြုံသစ်ပါ။ ဤသာဆိုလိုတယ်လို့ဟောင်းနွမ်းချို့ယွင်းမှုများ၊ဒါပေမယ့်ဖြည့်စွက်၊လတ်ဆတ်သောအကြောင်းဒါကြောင့်အမှန်တကယ်လိုခံစားရရှိသည်ဖို့တစ်ဦးအကြောင်းပြန်သွားပြီးကြိုးစားအားလုံးထွက်။, အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအာကာသအကြောင်းဒီယိုမကြာခဏထွက်ထားဂိမ်းများမီသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးဖါလူအားလုံး–အားသြင္းစဥ္အဘို့ထိုသူတို့နှင့်အပျော်အပါး! ကျွန်တော်လုပ်ချင်ဒါဟာလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတင်ပို့နေကြသည်မှာတစ်လျောက်ပတ်သောပြည်နယ်နှင့်ငါတို့သည်မသာအသစ်ထည့်သောပစ္စည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထိုက်ပေ၏သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်။ ဘာမှမထက်လျော့နည်းကြောင်း–ကောင်းပြီ၊ဒါကအဓိကပြဿနာသင်သည်ငါ့ကိုတောင်းလျှင်!
-ငါအမုန်းတရားထိုင်ဖို့ဒီမှာရေးတက်အက်ဆေးများအပေါ်မြက်အွန်လိုင်းပေါက်ဂိမ်းများ၊အထူးသဖြင့်အခါသင်ရုံပေါ်ခုန်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အရနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်သွား။ ငါချင်ပါတယ်သောလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဖို့အခင်းအကျင်းများကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်တယ်အတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အသစ်ဆိုရင်၊ဒီချင်ပါတယ်ကြိုဆိုစီမံကိန်း! ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊အဘယ်သူမျှမငြင်းနိုင်ပါကြောင်းသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ထိပ်အရည်အသွေး XXX၊ဒီအစက်အပြောက်သွားမယ့်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု–ပေးရန်အတွက်အသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်ရသင့်ကျိကျိလက်ချောင်းအပေါ်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္းဆြုံးကမ္ဘာပေါ်တွင်ပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။, ဒါဟာသွားမယ့်သင်စောင့်ရှောက်ကြောတကယ့်ကိုအချိန်ကြာကြာအထိ–သင်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲဆီအခွံမာသီးဖြစ်သည်!